धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा रोकियो २८ कम्पनीको आईपीओ निष्कासन
काठमाडौं - नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा बोर्डमा आवेदन दिएर बसेका २८ कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन रोकिएको छ। अध्यक्ष नहुँदा बोर्डले आईपीओ निष्कासन गर्न तयारी पूरा गरिसकेका कम्पनीलाई समेत स्वीकृति दिन सकेको छैन। आवेदन दिएका कम्पनीको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया अलमलमा परेसँगै नयाँ आवेदन दिन आउने कम्पनीको संख्या पनि न्यून छ।
सार्वजनिक (पब्लिक) कम्पनीले सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलनका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दछ। यस्तो सेयरको मूल्य साधारणतया १०० रूपैयाँ प्रतिकित्ता तय गरिएको हुन्छ। आईपीओ खुलेका समय सर्वसाधारण लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्छन्।
यद्यपि, कुनै कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्दा अंकित मूल्य १०० रूपैयाँभन्दा धेरै पनि तोक्न पाउँछ। यसकारण कतिपय कम्पनीको मूल्य भने १०० रूपैयाँभन्दा बढी तय गरिएको हुन्छ।
आईपीओ निष्कासन गर्न कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यस्ता कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धकसमेत तोक्नुपर्ने हुन्छ।
कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आईपीओको जोखिम के-कस्तो छ भनेर रेटिङ कम्पनीबाट मूल्यांकन गराएको हुनुपर्छ। नेपालमा केयर रेटिङ नेपाल र इक्रा नेपालले रेटिङको काम गर्दै आएका छन्। यी दुई कम्पनीले आईपीओमा लगानी गर्दा रहने जोखिमका आधारमा रेटिङ प्रदान गर्दछ। यसरी प्रक्रियामा गएका कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाउँछन्।
बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्छ। सूचनामा आवेदन कहिलेदेखि कहिलेसम्म खुलाउने? कति कित्तादेखि कति कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने? भन्नेबारे स्पष्ट खुलाइएको हुन्छ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर आईपीओ निष्कासनका लागि अन्तिम स्वीकृतिको लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनी पुस १६ गतेसम्म २८ वटा रहेका छन्। यी कम्पनीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि योग्य छ छैन, अनुसन्धान गरेर आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ।
अहिले धितोपत्र बोर्ड नै नेतृत्वविहीन बनेर बसेको छ। यसकारण बोर्डमा आवेदन दिएका कम्पनीलाई अध्ययन गरी आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति दिने प्रक्रिया अलमलमा परेको हो।
रोकिएको आईपीओ कुन कम्पनीको कति?
धितोपत्र बोर्डमा २८ वटा कम्पनीले छ करोड ७२ लाख ४७ हजार चार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। यसरी आवेदन दिनेमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनीरहेका छन्। आवेदक २८ मध्ये १७ वटा जलविद्युत् कम्पनी छन्। यस्तै छ वटा लघुवित्त कम्पनी, दुईवटा बिमा कम्पनी तथा तीनवटा अन्य कम्पनी रहेका छन्।
बुक बिल्डिङबाट आईपीओ ल्याउने तयारी पनि अन्योलमा
धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनका लागि ल्याएको नयाँ विधि ‘बुक बिल्डिङ’मार्फत् आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया पनि अहिले सेलाएको छ। केही समयअघि सर्वोतम सिमेन्टले यो प्रक्रियाबाट आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डसँग छलफल गर्दै आएको थियो। यस्तै, कम्पनीले यो विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्नेबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर नै जानकारी दिएको थियो।
यता बोर्डले पनि यो विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएका प्रक्रियालगायत सबै कुराको अध्ययन गरेको थियो। यसैबीचमा सर्वोतम सिमेन्टलाई उक्त विधिमार्फत् आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति दिनुपूर्व नै नियमविपरीत सेयर किनेको पाइएपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।
यससँगै बुक बिल्डिङमार्फत् आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो। अहिले बोर्डमा कुनै पनि कम्पनीले यो विधिबाट आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन नदिएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए।